🥇 ▷ Waxyaabaha Yar yar ® Weligaa - Barnaamijka toddobaadlaha ee iTunes ✅
Waxyaabaha Yar yar ® Weligaa – Barnaamijka toddobaadlaha ee iTunes
Toddobaadkan Apple waxay dooratay sida codsi usbuuca Waxyaabaha Yar yar weligood. Codsigani waa ciyaar halxiraala ah oo leh caqabado xiiso leh oo aad kaga furi doontid halxiraalayaal cusub, ama waqti ha ahaato ama tiro waxyaabo ah, waxaad u baahan doontaa inaad muujiso isku xirnaantaada caqabad kasta.
Waxyaabaha Yar yar ee weligood waa sii wadida aadka loo filayo ee Little Waxyaabaha ‘, oo ahaa App ee Toddobaadka iPad-ka. Waxay la timid boqolaal horumarin ah oo ka badan kuwii hore, sidoo kale waxaa loo heli karaa sidii app caalami ah oo ku saabsan iPhone, iPod iyo iPad.
Raadi kumanaan walxood.
Naqshad cajiib ah iyo cod qurux badan.
La jaan qaada muuqaalka ‘Retina bandhigay’ ee iPhone iyo iPad-ka cusub.
Maaddaama liisaska shaygu ay si otomaatig ah u soo baxayaan, waad ku raaxeysan doontaa illaa weligaa! Waxay siisaa ciyaar badan.
Hel 101 xabbadood oo halxiraala oo xalli 9 xirmooyin.
Waxaa loo sameeyay ilaa ugu dambeeya: In Little Waxyaabaha Weliga ah waad samayn kartaa halxiraalaha ka soo baxa cusbooneysiinta mustaqbalka.
Madadaalo qoyska oo dhan.
Maxaa ku cusub nooca 1.4.1
Waxyaabaha yar yar ee weligood ku yaal waxay ku yaalaan App Store waxayna la jaan qaadayaan iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (jiilka saddexaad), iPod taabashada (jiilka afraad), iPod taabashada (jiilka 5aad) iyo iPad. Wuxuu ubaahanyahay macruufka 4.3 ama wixii ka dambeeya. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Shiine, Holand, Ingriis, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Jabbaan, Kuuriya, Polish, Boortaqiis, Ruush, Iswidish.